Ternopil - Study in Ukraine. Xarunta Admission Yukreeniyaan
Ternopil waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee reer galbeedka Ukraine, oo ku yaalla ay wadnaha iyo xaaladda xarunta ganacsiga oo muhiim ah. Waa xasilloon a, magaalada cajiib ah oo doog leh jawi u gaar ah, taariikhda dhalaalaya iyo ogaaaday ee dabiiciga ah oo xiiso leh, indhaha taariikheed iyo naqshadda.
Magaca Ternopil, sida laga soo xigtay mid ka mid Sheeko, Billaaba ka weedha ah “polye ternovoye” (macno ahaan, "Field blackthorn"), sababta oo ah geedaha blackthorn in loo isticmaalaa in halkan koraan. Halyeeyga kale ayaa sheegtay in magaalada loo magacaabay ka dib markii ay aasaasihii, Grand Crown Hetman Jan Tarnowski. Waxa uu ahaa kii ugu, ka dib markii warqad taliyihii Polish Sigismund waxaan Old ku baaqaya magaalo ka qaata in la aasaaso, dhisay qalcaddii deyr halkan qarnigii 16aad.
In qarniyadii dhexe, Ternopil isgoyska of dariiqyada ganacsi muhiim istaagay, noqoto xarun muhiim u ah ganacsiga. oo magaaladuna waxay ahayd qayb ka mid ah Empire Austro-Hungarian tan iyo qarnigii 18aad, laakiin ka dib markii dhamaadkii dagaalkii aduunka waxaan, waxaa soo laabtay Poland. In 1939, Ternopil noqday qayb ka mid ah Midowga Soofiyeeti, iyo, tan 1991, ee madax bannaan Ukraine.
Magaalada ayaa dhibic ugu muhiimsan ee xiisaha waxaa loo arkaa inay Castle Hore, taariikhda, kuwaas oo ku dhawaad ​​bilaabay 500 sano ka hor. Waa dhismaha ugu da'da nool ee Ternopil. In kastoo qalcaddii ahaa qalcaddayda daafaca, ma qarsoomi kari waayay Xoogaga dagaalka: qalcaddii la dumay dhowr jeer, laakiin waxaa mar kale iyo mar kale dib. Qarnigii 19aad, qalcaddii la hoyga ah classicist Ruush jeestay, iyo difaaca ay ka harsan tahay lagu halligay. Today, derbigooda dhagaxa ah la irdaha aadka u qurxiyey a wareegsan madaxtooyada.
Mida GEMS ah naqshadda in la siiyo Ternopil ay fiirin awaal ah, Church Dominican uu u qalmo Xusuuso gaar ah. Dhisay qarnigii 18aad ee style dabayaaqadii Baroque, munaaradaha ay xarrago kici ee xarunta magaalada taariikhiga ah. Near kiniisadda u taagan meelood nool suufiyadoodii Dominican '. In times Soofiyeeti, kaniisadda la galay gallery sawir jeestay; waa hadda firfircoon mar kale.
Laakiin xataa dhismayaasha sacral dheeraad ah ee qadiimiga ah ayaa ka badbaaday in Ternopil. Mid ka mid ah dalka durkiya ugu madaxtooyada magaalada jir waa ku Church of uuga ah ee Laanqayrta ah, dhisay qarnigii hore 16 gayiga ah macbudka hore Kyivan rus. Wakhtigaas, waxaa la badanaa loo isticmaalaa si ay u difaacaan magaalada. Waa ma aha oo kaliya dhismaha ugu da'da weyn ee Ternopil, laakiin sidoo kale mid ka mid ah ugu aan caadi ahayn, sida kiniisadda ayaa domes lahayn. Recently, kiniisadda bogsatay oo loo magacaabay “Church on balli. "Church qadiimiga ah ee dhalatay, asaasay 1602, waa aan ka yarayn oo xiiso leh.
Laakiin kaadhka wicitaanka Ternopil waa ay u gudubno samee 300-hektar, oo ku yaalla qalbiga magaalada. gudubno, waa sida jirka sida magaalada laftiisa: waxaa la abuuray waqti isku mid ah sida qalcaddii. Parks iyo Jannooyin ay hareereeyeen u gudubno,, iyo waa meel caan ah oo strolling muwaadiniinta iyo marti sharaf si isku mid ah.
Dad badan oo kala duwan taariikhi ah, durkiya naqshadda iyo dhaqanka sidoo kale waxaa laga heli karaa on duleedka Ternopil ee: kasta magaalada iyo tuulada kasta oo aad Doono ka kooban Guryohoodii qaar qalcaddii Dr Makumbe, kaniisadda hore ama guri keniisad. Kremenets Castle iyo Lavra Pochayiv waa meelaha ugu caansan.
Ternopil waa magaalo aad u raaxo iyo is dajiyaan. Taasi waa sababta safra badan oo halkan si aad u ma aha oo kaliya u yimid inuu u bogi indhaha ay, laakiin in ay sidoo kale dareemayaa jawi aan caadi ahayn diiran iyo soo dhawayn magaalada this la yaab leh.
Last update:22 January 19